Xildhibaan;Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo Si kulul ucambaareeyay Qaraxii Muqdisho. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Muqdisho(FMN)-Xildhibaan;Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo kamid ah xubnaha gollaha wakiilada Shacabka ee Soomaaliya, ayaa si kulul ucanbaareeyay weerarkii ay dadka badan ku halaagsameen ee dhawaan ka dhacay magaalada muqdisho.
Isaga oo la hadlayay TVga Qaranka xilli uu kusugnaay xarunta gurmadka Qaran ee loogu talo galay in laga hago howlaha samatabixinta iyo baadigoobka ah ee loo fidinayo dadkii ku wax yeeloobay qaraxaasi,ayuu sheegay in ay tani tahay musiibo Qaran oo taabanaysa qof kasta oo Soomaali ah,loona baahanyahay in meel loogagasoo wada jeesto siddii la isaga dhicin lahaay cadowgii arintaas soo maleegay.
Xildhibaanka ayaa Yidhi,”dhacdadan waa in ay na bartaa inaan joojinno caadifadda iyo kala aragti duwnaanshaha, argagixisada iyo annaga waa inaan kala baxnaa, mana garanayo meel weerar lagu qaaday oo hal goor ay ku naf-waayeen in ka badan 300 oo qof, midnimo ayaa muhiim ah”.
Sidoo kale,Xildhibaanku waxa uu ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda leh Aqoonta dhanka caafimaadka ah,gaar ahaan daaweynta Gubashada iyo Kabniinka in ay gacan ka geystaan daryeelka bukaanada Isbitaalada yaala,Isaga oo xusay in howl-wadeenada caafimaadku ay ka cabanayaan aqoon yari dhanka cilmiga caafimaadka ah oo laxidhiidha dhibaatada soo gaadhay dadkii uu qaraxu saameeyay oo ubadan Gubasho iyo jabniin.
Xildhibaan Faarax ayaa si gaar ah ugu tacsiyadeeyay ehelada iyo asxaabta dadkii halkaas ku nafwaayay.Waxa uu sidoo kale tibaaxay in qofkasta oo Alshabaab dhaqaale ku taageeray ama Zako ahaan ha ubixiyo ama si kale ha ugu kaalmeeyee uu qeyb ku leeyahay danbiga dhacay aakhirana la su’aali doono.
Xildhibaanka ayaa ugu danbayntii umahadceliyay dhammaanba dadkii gacanta ka geystay kaalmeynta dadkii ay dhibaatadu qabsatay oo ay ugu horeeyaan shacabka soomaaliyeed qeybahiisa kala duduwan,oo uu sheegay in ay isugu gurmadeen si aan hore loo arag.
Waxaa kale oo uu umahad celiyay dalalka Turkiga ,Qatar iyo Jabuuti oo soo diray diyaarado xamuul ah oo sida daawooyin iyo xirfadlayaal dhanka caafimaadka ah.sidoo kale ayuu aad ugu mahadceliyay dadkii taageerada dadban muujiyay sida;Duqqa Magaalada Paris ee dalka faransiiska iyo Ra’isul wasaaraha dalka Canada.
Previous Previous post: Dawlada Qatar oo Diyaarad Sida Gar-gaar Caafimaad Usoo Dirtay Soomaaliya.
Next Next post: Diyaarad Sida Daawooyin uu Mareykanku soo diray oo Muqdisho ka soo Degatay.